Apple wuxuu sii daayay Beta Developer Second for macOS Big Sur 11.2 | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan horeyba u helnay horumariyeyaasha macOS Big Sur 11.2 beta labaad. Kuwa doonaya inay soo dejistaan ​​softiweerkan cusub waa inay ka soo maraan barta ay shirkadda Mareykanku u haysato kiisaskan. Dabcan, waa lagama maarmaan in la noqdo horumariye sidaas darteedna looga diiwaangaliyo shuruudahan si loo helo beta-kan labaad.
Apple ayaa soo saartay beta labaad loogu talagalay horumariyeyaasha ee macOS Big Sur 11.2, oo siiya tijaabiyeyaasha nooc cusub oo ah nidaamka hawlgalka Mac si ay u tijaabiyaan howlaha cusub ee la hirgeliyay.
Beta-kii ugu horreeyay ee noocan ah macOS Waxaa la bilaabay bishii Diseembar 17keedii. Aad u yar kadib markii version 11.1 loo sii daayay dadweynaha. Waxaan haddaba tijaabineynaa noocaan cusub ee softiweerka ah
Es goor hore in la ogaado waxa cusub taas ayaa lagu soo daray Beta-kan cusub. Laakiin sida xaqiiqada ah haddii ay jiraan oo ay mudan yihiin in wax yar laga sheego waxaan heli doonaa macluumaad ku saabsan iyaga waana kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan. Waxaan ku farxi doonnaa inaan iskaashi la yeelano si aan u aragno haddii ay jiraan warar ku saabsan noocyadan cusub.
Sidaan horay u sheegnay, beta-kan labaad waxaa loogu talagalay horumariyeyaasha iyo si ay u awoodaan kala soo bax noocyadan cusub waxay ka samayn karaan xarunta xakamaynta ee Mac ama gelitaanka websaydhka in shirkadu ay ka heli karto internetka.
Sida had iyo jeer aan dhahno marka beta cusub soo baxo, taasi waa taas lagugula talin maayo inaad ku rakibtid qalabkaas waaweyn. Sababta ayaa ah in kastoo iibku caadi ahaan xasilloon yahay, waa inaan maanka ku haynaa inay soo bandhigi karaan guuldarooyin ka dhigi kara Macs-ka aan duugoobi karin.
Haddii isbeddelku sidiisa ahaado, bil gudaheed waxaan haysanaa beta-kii saddexaad ee noocaan cusub ee macOS Big Sur 11.2
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Apple wuxuu bilaabay macOS labaad Big Sur 11.2 horumariyaha beta
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee watchOS 7.3 loogu talagalay horumariyeyaasha